FANOVANA FOMBA FIASA :: Hisy ny fitaovana vaovao hiatrehana ny loza voajanahary • AoRaha
FANOVANA FOMBA FIASA Hisy ny fitaovana vaovao hiatrehana ny loza voajanahary
Hisy ny torolalana vaovao omena ireo tompon’ andraikitra rehetra any amin’ny faritra amin’ny fiarovana sy fiatrehana ny loza voajanahary mety hiseho eto Madagasikara. Novokarin’ny biraon’ny Firenena mikambana misahana ny fampihenana ny tahan’ny loza voajanahary UNISDR ity torolalana ity, izay mifantoka amin’ny fampiasana ny kajimirindra « Words in action » na ny « Suivi du cadre de Sendai ».
« Toy ny firenena rehetra, anisan’ny iharan’ny loza voajanahary betsaka i Madagasikara ary tena mavesatra ny vokatr’izany eto amintsika. Araka ny fanambaran’ny UNISDR rahateo dia tsy nahafapo ny fepetra noraisina tamin’ ny 2005 hatramin’ny 2015 iatrehana ny loza voajanahary satria nahafahana nampihena ny loza no tsy nafahana nahafantatra ny vokadratsiny mety hitranga », hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary Bngrc, omaly, tetsy Andavamamba.
Nisy tamin’io fotoana io ny atrikasa fanofanana ireo mpisehatra rehetra amin’ny fanatanterahana ity kajimirindra ity, tetsy Andavamamba. Ho an’i Madagasikara, dia manomboka amin’ny taona 2019 no hampiasana izany.
Raha ny fantatra, ao anatin’ny dimy ambin’ny folo taona no hampiasana ny kajimirindra ary tokony hanampy amin’ny fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro izany, hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity. « Hanampy bebe kokoa ny mpisehatra izay te hamorona fomba fiady vaovao hiatrehana ny loza voajanahary ny fisian’ny torolalana sy ny kajimirindra vaovao. Natao hanamafisana ny fitantanana ny loza voajanahary ihany koa izany », hoy hatrany ity loharanom-baovao ity.
ADY AMIN’NY TSY FANARAHAN-DALANA :: Hanara-maso ny taksiben’Ivato ny kaominina, Zandary, minisitera